Mandra-pahoviana ny lalana La Sal Loop? - Bisikileta An-Tendrombohitra
Tena > Bisikileta An-Tendrombohitra > La Sal Mountain loop loop - vahaolana amin'ireo olana
La Sal Mountain loop loop - vahaolana amin'ireo olana
Mandra-pahoviana ny lalana La Sal Loop?
Androany dia any amin'ny Dark Canyon Wilderness isika. Io irery no faritra efitra any amin'ny ala nasionalin'i Manti-La Sal. Notendren'ny lalànan'ny Wilderness tao Utah tamin'ny taona 1984.
Ary izahay dia ao amin'ny Horse Pasture Canyon izay manakaiky ny lohan'ny Dark Canyon. Dark Canyon dia rafitra canyon lehibe, izy io no rafitra canyon voalohany voatendry ho efitra any amin'ny Plateau Colorado. Tena efitra tsy manam-paharoa ity.
Manomboka amin'ny haavo avo kokoa eo amin'ny Elk Ridge izy io. Noho izany dia manana karazana zavamaniry tena tsy manam-paharoa eto ianao, manomboka amin'ny aspen sy douglas fir mankany amin'ny tempoosas ary farany mankany amin'ny zavamaniry pinyon, juniper ary mugwort. Ka dia efitra tsy manam-paharoa tokoa satria miaro karazana tontolo iainana isan-karazany.
Dark Canyon mihitsy, manana rafitry ny làlana eto izahay izay tantananay sy karakarainay. Tany efitra io ka mbola tsara tarehy ihany. Saingy misy safidy backpacking tsara eto.
fihenan'ny erectile bisikileta
Misy tadiny 40 kilometatra izay midina eo amin'ny Peavine Canyon ary miakatra ao amin'ny Dark Canyon. Ary misy toerana maro ho an'ny fitsangatsanganana antoandro toy ny misy antsika izao dia toerana tsara hanaovana fitsangatsanganana an-andro na orinasa fitsangantsanganana fohy kokoa. Azo atao koa ny manangona soavaly eto, malaza amin'ny olona mitondra soavaly na ampondra ary mitondra ny fitaovany rehetra.
Ireo no fomba lehibe hidirana any an'ala. Ny tany efitra dia noforonina tamin'ny fomba iray mba hitehirizany ny maha-voajanahary sy ny fahafaha-manao fialamboly tranainy ary koa ny mitokana, ny fahafaha-mitoka-monina. Ary ny fanirery dia iray amin'ireo toetra tsara anananay eto amin'ny Dark Canyon.
Sarotra be ny mahazo azy, henjana ihany ny lozisialy, saingy raha miezaka ny hiala eto ianao dia hahita tany feno bibidia. Ny iray amin'ireo faritra tiako indrindra momba ny Dark Canyon dia ny mandry eto alina. Ny lanitra dia lasa mainty mainty fotsiny, mahita ity kintana mahavariana ity ianao amin'ny fandotoana hazavana kely dia kely, ampy hahitanao koa ny vahindanitra Milky Way izay mamaky ny sisin'ny lohasaha mihitsy, izay rafitra canyon miendrika soavaly.
Kiraro hazo amin'ny lafiny iray ary ny Dark Canyon etsy an-daniny. Ny vatobe dia mamaky vato sandaly mesa ka azonao ireo rindrina goavambe, tilikambo, andohalambo marobe rehefa miakatra sy midina amin'ilay lohasaha ianao. Ka mahavariana fotsiny ny manodidina voajanahary.
Ary ny anton-javatra iray hafa mahatonga an'i Dark Canyon ho efitra tsy manam-paharoa dia ny fananantsika ny rakotra kolotsaina tena mahaliana sy tsy mitongilana eto amin'ny lohasaha eto. Noho izany ny olona dia nonina tao amin'ity lohasaha ity nandritra ny an'arivony taona maro, nanomboka tamin'ny Paleo Indiana ary avy eo amin'ny ankamaroan'ny arkeolojia lehibe hitanao eto dia avy amin'ny Puebloans razamben'ny olona maro fantatra amin'ny anarana hoe Anasazi. Ary amin'ireto dia misy karazana rava maro be ao amin'ny lava-bato izay mampiseho ny faharetan'ny olona nonina teto.
Amin'ny fotoana iray amin'ny tantara dia mety ho saha katsaka eto aoriantsika io. Misy rava manerana ny lohasaha mihitsy izay nitehirizany ny katsaka, ary tena tsy manam-paharoa Izy io dia zavatra arovanay sy tantananay mba hahitan'ny hafa azy amin'ny toerana madio. Betsaka koa ireo loharano ara-tantara mbola eto.
Eo ambaninay ambany eto, eto amin'ilay lohasaha, dia manana ilay antsoina hoe Scorup hut ianao. Tranokala manan-tantara ity izay nampiasain'ny orinasa omby Scorup tamin'ny faramparan'ny taonjato. Miorina tsara, fatana hazo, zavatra maro samihafa azonao jerena ao izay naneho ny fipetrahana Anglo manan-tantara koa amin'ilay lohasaha.
Ka, toy ny nolazaiko, eto an-tany efitra dia ataontsika voajanahary izany, ka tena tianay ny olona eto tsy hamela soritra rehefa tonga eto izy ireo. Avela ny afo, ny permis dia tsy takiana amin'izao fotoana izao satria tsy dia mampiasa firy isika. Fa rehefa midina ianao dia mangataka amin'ny olona hampiasa toby efa misy fatana misy afo fa tsy hanangana vaovao.
Mangataka amin'ny olona izahay mba tsy hanamboatra fanaka fitehirizana eto, na seza na latabatra avy amin'ny vatolampy sns, ary tena ataovy voajanahary araka izay azo atao ilay faritra. Ny fiatraikany lehibe hafa mety hitranga dia ny fampiasana ireo tranokala arkeolojika ireo ary rehefa mitsidika an'ireto ianao dia tianao ho azo antoka fa manao azy io am-pitandremana tokoa ianao alohan'ny hanatonana ilay tranonkala dia tianao jerena sy ho hitanao, aiza no faritra mafy indrindra . Raha misy làlana efa misy dia tianao ny mampiasa azy; tsy te-hiakatra rindrina ianao, hametraka lanja amin'ny rindrina, hianika amin'ny varavarana na zavatra hafa toa izany.
Satria ny vahoaka marobe izay manao an'izany dia handrava io faharavana io amin'ny farany. Ny sasany amin'ireo tranobenay eto dia mbola misy tafo tsy mitongilana ihany. Azo antoka fa tsy te-hijoro amin'ny tampon-trano ianao; rafitra efa an'arivony taona ireo ary tena mora tohina amin'ity karazana fiantraikany ity.
Raha mitsidika an'ireny tranonkala ireny ianao dia mitandrema tsara rehefa mitsidika azy ireo. Misy ihany koa ny sombin-tanimanga sy ny vakoka voaro araky ny lalàna momba ny Antiquities. Ka rehefa hitanao ireo zavatra ireo dia avelao hilahatra, aza afangaro amin'ny antontam-bato kely izy ary manaova tranombakoka misokatra malalaka, avelao eo amin'izay misy azy ireo fotsiny.
Ny sahan'ireto zava-kanto ireto no zava-dehibe amin'ny arkeology amin'ny famaritana ny fomba niainan'ny olona teto sy ny vanim-potoana niainany ary inona ny lalana tokony hipetrahany eto. Noho izany dia mangataka fotsiny amin'ny olona izahay, tsy maninona ny mitsidika, toerana tsara hitsidihana ireo tranokala ireo, fa mitandrema tsara kosa rehefa manao izany ianao, avelao any ireo artifact ary aza asiana lanja eo amin'ny rindrina na miakatra eo am-baravarana. . Ary eto amin'ny Dark Canyon dia manana efitra tsy manam-paharoa isika.
Toerana tsy ampoizin'ny olona rehefa tonga eto izy ireo. Miaraka amin'ny rindrina sy tilikam-bato sedera mesa, miaraka amin'izany kolontsaina tena tsy manam-paharoa manararaotra mitsidika toerana nipetrahan'ny olona arivo taona lasa izay ary mbola mahita ny fomba niainany sy ny toerana onenan'izy ireo, miavaka tsy manam-paharoa izy io. Saingy eo am-pelatanan'ny mpitsidika ny hoavin'ity toerana ity sy ny fitehirizana ny maha-voajanahary ary tena misy dikany ara-kolontsaina.
Rehefa tonga eto ianao dia mangataka amin'ny olona mba hankafy ny taniny ampahibemaso sy hankafy an'ity ala dia ity, fa ataovy amin'ny fomba saro-pady ary aza mamela soritra.
Hatraiza ny La Sal Utah avy any Moaba?
nylalana loopdia lalana roalalambemalaza be. 90.44km (56.2 miles)ela.
Salama daholo, Madalyn ity. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fitsangatsangana mora foana ao amin'ny National Park Canyonlands sy ny Arches National Park any Moab, Utah. Raha mijanona ianao mandra-pahatapitry ny lahatsoratra dia hiresaka momba ny zavatra niainanay izahay tany amin'ireo valan-javaboary mahafinaritra.
Voalohany dia ny Mesa Arch Hike ao amin'ny Canyonlands National Park. Ity fitsangatsanganana fohy ity dia mila latsaky ny iray kilaometatra ary hitondra anao hatrany amin'ny Mesa Arch sy ny fomba fijery mahatalanjona izay mitazana ny lohasaha. Ny tokony homarihina momba ny Mesa Arch dia eo ambonin'ny hantsana iray izy io.
Mitandrema amin'izay rehefa maka ireto sarin'ny fianakaviana ireto. Faharoa ao amin'ilay lisitra ny Grandview Trail ao amin'ny National Park Canyonlands. Ity fitsangatsanganana mora ity dia tsara ho an'ny haavon'ny fahaiza-manao rehetra Jereo, ny fomba fijery dia tsy ho diso amin'ny Grand View Trail.
Fahatelo ao amin'ilay lisitra ny Delicate Arch Hike ao amin'ny Arches National Park. Ity fitsangatsanganana boribory dimy kilometatra ity dia somary sarotra kokoa, fa hitondra anao any amin'ny Delicate Arch malaza ary mendrika ny ezaka fanampiny. Tadidio fa tsy misy alokaloka amin'ity fitsangatsanganana ity.
Ka manaova ny takelam-bolanao ary mitondra rano fanampiny. Aza hadino ny mijery ny vinavina amin'ny andro kasainao hanaovana io dia io. Raha mafana dia tokony hifoha maraina ianao ary hamita ity fitsangatsanganana ity amin'ny maraina.
Ity dia fomba tsara hanombohana ny andro. Manaraka ny lisitray dia ny Park Avenue Trail ao amin'ny Arches National Park. Ity lalana ity dia eo amin'ny 3.2 km eo ho eo ny halavany ary manaraka ny fanambanin'ny lohasaha amin'ny lohasaha monoliths lehibe.
Fitsangantsanganana iray hafa tsara ho an'ny sokajin-taona rehetra io. Azonao atao ny manao io fitsangatsanganana io amin'ny hafainganam-pandehanao ary mankafy ireo fomba fijery tsy mampino eny an-dalana. Ny fitsangatsanganana farany sy mora indrindra ao amin'ilay lisitra dia ny fitsangatsanganana Double Arch.
Ity dia tena tsy fitsangatsanganana fa tsy fitsangatsanganana fohy amin'ity endri-javatra voajanahary tsy mampino ity. Ity lalana fohy ity dia antsasa-kilaometatra eo ary miverina ary hitondra anao any sy manodidina ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra ao amin'ny Arches National Park. Fantatsika fa vitsivitsy monja amin'ireo fitsangatsanganana mahagaga eto amin'ity faritra ity.
Noho izany dia ampahafantaro anay ireo toerana fitsangantsanganana any Moaba tianao indrindra amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Araka ny efa noresahiko tao amin'ilay lahatsoratra, hiresaka momba ny zavatra niainanay izahay tany Arches sy Canyonlands. Ka raha mitsangatsangana any Moab ianao, ity faritra ity, Arches National Park, Canyonlands National Park, dia mahavariana ny fomba fijery ho azonao, fa amin'ny fotoana sasany amin'ny taona dia mety ho tonga amin'ny vidiny ireo fomba fijery ireo satria mety hahatratra 115 izy ireo. 116 degre ary tsy vazivazy izany.
Tena mila miomana amin'izany ianao. Eny, nanao ny dia an-tongotra hatrany amin'ny Delicate Arch izahay ny marainan'ny maraina. Heveriko fa toy ny 10 00 9 30 9 30 izany.
Mety ho maraina ho antsika izany ho an'ny olona sasany izay tsy hoe vao maraina na fantatro fa vao maraina aho no nilaza fa efa ho maraina ny maraina ny olona ary tena tsy safidy ratsy izany satria mafana dia nandeha nandeha an-tongotra tamin'ny toetr'andro 100 degre isika Nandeha namakivaky ny ranonay izahay, fantatrareo fa nitifitra fotsiny aho, fa haingana dia tsara izahay nitondra rano, fa tena mila bebe kokoa izahay. Ka manaova satroka, alao antoka fa manana sunscreen ianao ary mitondra rano roa tavoahangy fa tsy iray fotsiny. Heveriko fa jereo ny vinavinan'ny toetr'andro ary tsy maninona ny taonanao na ny fahaizanao amin'ny atletisma. ny fahaiza-manao dia mahazaka ny fitsangantsanganana tantaniny dia mahazo haavo kely izy, tsy dia adala loatra izy io, um, ny tsy tokony ho adino dia misy teboka vitsivitsy amin'ity fitsangatsanganana ity izay milatsaka.
Somary tery ihany izy ireo, somary tery kely ihany, sa tsy izany? Tsy mampatahotra izany, fa zavatra tadidinao fotsiny ny mijery azy, fantatrao raha manan-janaka miaraka aminao ianao na mifampijery fotsiny, ary rehefa miakatra amin'ny toerana misy ny andohalambo marefo ianao dia saika hipetraka toy ny vilia fangaro. Somary hafahafa ihany ny anao raha toa ka very ampahefatry ny volana ianao dia aza manao an'izany fa raha te hanakodia ny dice ianao dia fantatrao ireo lalao taloha ireo amin'ny arcade izay ametrahanao ny manodidina anao ary somary mifoha izy io ary mihodina manodidina ny faribolana ary midina ary mieritreritra aho fa naka ny volanao fotsiny aho, um ary tena tsara izany fampitahana tsara izany ka jereo fa hametraka lahatsoratra ato amin'ity tranokala ity izahay eto rehefa miresaka izahay fa tsy nino ny tenako hoe inona izany fampitahana izany. dia toy ny iray amin'ireo lalao eh ary mazàna be dia be ny olona ao no manandrana maka sary eo an-tampony ka mila miandry ianao mandra-pahatongan'ny anjaranao haka ny sarinao eo ambanin'ny andohalambo eny dia mahareta fotsiny ary mitandrema uh akanjo kiraro fitsangantsanganana tsara oh eny, satria ny tsipika iray amin'ireo dia ny fitsangantsanganana izay ataonao any ivelany, alao antoka fa hanaovanao azy ireo dia hafana ary hisy hantsana vitsivitsy na fidinana vitsivitsy. Na aiza na aiza misy anao amin'ireo valan-javaboary ireo.
Mitandrema, mitandrema, tazomy ny sainao ary ity dia toy ny fitsangantsanganana 101. Tandremo ihany, fantatro Fa mieritreritra aho fa rehefa tonga eto ianao na rehefa mandeha any an-tendrombohitra dia mahazo tombony ambony ianao, zavatra iray fotsiny izany raha ' Tsy mahazatra azy aho, um ary somary sendra sendra sendra olona fotsiny ianao, miantso anay foana izahay eo akaikin'ny trano mba hanomanana zavatra fotsiny. Amin'ity lahatsoratra ity hatreto, mazava ho azy, efa niresaka momba ny fitsangatsangana azonao andehanana izahay, ary mifantoka be amin'ny fitsangatsanganana izahay fa te hilaza ihany koa fa be dia be ny zavatra azo atao amin'ny moab fa tsy ny fitsangatsangana fotsiny ny valan-javaboary eny, midika izany fa manana ATV kodiarana efatra izy ireo.
Misy balaonina rivotra mafana. Manana ony mahafinaritra izy ireo izay azonao andalovana. Manana lakana haingam-pandeha New Zealand style izay mbola tsy hitako na aiza na aiza teto Etazonia izahay ary nanandrana nanao izahay fa tsy nifanaraka ny fotoana fa tao an-tsaiko dia nieritreritra aho fa tsy maintsy miverina any Moaba ary hanao izany satria mahafinaritra toa.
Tena toy ny valan-javaboary mampientanentana manao azy io, izay tena milay ary tsy dia toy izany matetika any amin'ireo valan-javaboary hafa. Eny, be dia be ny zavatra tsy maintsy atao any Moab ary tianay ny dianay tany. Tianay ny mitsidika ireo valan-javaboary ary tena manantena ny hiverina izahay ary manandrana zaridainam-pirenena canyonlands hafa zaridainam-pirenena utah moab hikes mora miakatra ianao mora mandeha arcs mora mitsangantsangana Canyonlands moab utah hikes moab canyonlands national park izay hitsangatsangana amin'ny moab aiza no fitsangatsanganana amin'ny fitsangantsanganana an-tanety canyonlands
Aiza ny Tendrombohitra La Sal?
20 fotsinyan'arivonyatsimon'nyMOABAdia nyIreo Tendrombohitra Masira, izay ampahany amin'ny Manti-Ny siraAla nasionaly. Mahatratra 13000 metatra ny haavony, ireto alpine iretotendrombohitrano tandavan-tendrombohitra avo indrindra amin'nyUtah.
Inona no tandavan-tendrombohitra eo atsinanan'i Moaba?
nyIreo Tendrombohitra MasiranaNy siraNy sakany dia aTENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAfaritra hita any amin'ny distrikan'i Grand sy San Juan any amin'ny fanjakan'ny fanjakan'i Etazonia ao Utah, manaraka ny sisintany miaraka amin'i Colorado. Ny haavony dia miakatra ambony sy atsimo atsinanan'i Moaba ary avaratry ny tanànan'iNy sira.
Ny Arches National Park dia miorina ao amin'ny Canyon's Canyon Country, lalana maharitra adiny efatra atsimoatsinanan'ny renivohi-panjakana, Salt Lake City. Ny ankamaroan'ny olona dia manomboka ny diany ao amin'ny mekeka an-kalamanjana any Moaba, izay napetraka eo afovoan'ny sasany amin'ireo faritra mikitoantoana sy mahavariana indrindra any Etazonia. Dimy kilaometatra avaratry ny tany Moaba fotsiny no misy ny fidinana mankany amin'ny Valan-javaboary Arches, izay misy ny andohalambo fasika lehibe indrindra eto an-tany.
Saingy ho hitanao mihoatra ny arches, rock slick and canyons eto, dia hahita tantara ara-jeolojika an-tapitrisany taona maro ianao. Mandehana miverina mamaky ireo toko voalohan'ny valan-javaboary ary mahita tany tondra-dranon'ny ranomasina, zarain'ny ranomandry ary voadin'ny rivotra. Araho ny dian'ireo Amerikana Teratany, izay nifandray akaiky tamin'ireo monoliths sy andohalambo goavambe ireo.
Androany, ny Arches Scenic Drive 17-kilometatra dia mamela ny mpitsidika hamakivaky ireo toerana manintona ny valan-javaboary ao anatin'ny adiny roa mba hiaina ny fanomezana sy ny hakanton'ny Arches, hampiadana sy hivoaka ny fiaranao. Mpiambina valan-javaboary iray ary mpanoratra tany an'efitra, Edward Abbey indray mandeha, nanao hoe: 'Tsy ho hitanao ny efitra raha tsy maimbo azy ianao'. Ny làlana fitsangatsanganana any amin'ny Arches dia mora arahana, saingy tadidio fa ireo antontam-bato hitanao eny amin'ireo faritra slickrock dia hanampy anao hahita ny lalanao ka aza manangana lalana vaovao.
Dimy minitra fotsiny mandeha mankany amin'ny valan-javaboary, mitondra fiara ao amin'ny Park Avenue Trailhead ary mandehandeha eo ambanin'ny aloky ny rindrin'ny lohasaha mitaingina mampatsiahy ireo tranobe manara-penitra any New York City. 15 minitra hafa ao amin'ny valan-javaboary, talanjona amin'ny fahitana ny Balanced Rock, ary avy eo mivadika ho Fizarana Windows. izay misy ny andohalambo mamolavola ity tany tsy manam-potoana ity, sy ny fisiantsika mandalo eto.
Ilay zaridainam-panjakana dia misy andohalom-bato 2.000 mahery, ary folo minitra fotsiny ny fiakarana ny dragona lehibe mahafinaritra no tena manintona azy. Mijanona ao amin'ny Delicate Arch Lookout haka an'ity fahagola ara-jeolojika ity toy ny vady Cowboy mpivady hita manerana ny mesa lavitra. Fa raha hanakaiky ity kisary ao Utah ity dia mila mandeha an-tongotra ianao.
Ny lalana iray kilaometatra sy sasany mankany Delicate Arch dia misy fizarana sarotra. Ka manaova kiraro mahery ary itondray rano, ary makà ora roa na telo hiambenana fitsangatsanganana tsy hadino mandrakizay.
Aorian'ny Delicate Arch, mpitsidika marobe no mihodina ary miverina miverina any Moaba, mahamenatra satria manome valisoa ireo zaridaina lavitra kokoa ilay valan-javaboary. Mitsangatsangana mankany amin'ny labyrintan'ny lafaoro mirehitra i Ranger; mandosira ny masoandro eo afovoan'ny lohasaha mangatsiaka amin'ny Sand Dune Arch Trail. Avy eo araho ny lalana mianavaratra mankany amin'ny fiafarana lehibe an'ny zaridaina, ny Devil's Garden, mety ho tapitra eto ny lalana mahafinaritra an'ny valan-javaboary, saingy misy dia an-tapitrisany maro miandry anao eo am-piandohan'ny zaridaina Devoly
Raiso ny dia an-tongotra mora mankany amin'ny Archcape Arch tsy mampino, ny andohalambo lava indrindra any Amerika Avaratra, ary avy eo rehefa mahazo tongotra ianao, midira lalindalina kokoa amin'ny Devil's Garden, izay nahitan'ireo mpitsidika ny fitokana-monina, fialofana ary sakafo ara-panahy tao anatin'ny tilikambo, vombony , ary ny andohalambo mandritra ny an'arivony taona ny Arches National Park dia iray amin'ireo tantara ara-jeolojika lehibe eto an-tany, tany zarain'ny ranomandry, voahosin'ny rivotra, ary namboarin'ny masoandro, ary ho an'ireo izay miadana sy mihaino ity tantara ity, izy ireo koa dia ho mandrakizay an'ny Toerana ity. Satria izany no valisoa amin'ny fotoana laninao, ary izany no fanomezana an'ny tsipìka.
Ahoana no ahatongavanao any amin'ny Corona Arch?
Mikaroha ny lalana: Avy any Moaba, mandehana avaratra andrefana amin'ny US 191 miankavia (mianatsimo) mihodina amin'ny UT 279 / Potash Road (1,3 km andrefan'ny Bridge Bridge Colorado). Mandehana mianatsimo amin'ny UT 279 mandritra ny 10 kilaometatra mankany amin'ny nanao soniaCorona ArchLàlana eo ankavanana (atsinanana) amin'ny làlambe mifanohitra amin'ny Gold Bar Campground.
Aiza no hanjonoako any Moaba?
eo akaiky eofanjonoanafarihy ao amin'ny La Sal Mountains dia ao anatin'ny 20 kilaometatra miala ny tanàna afovoanyMOABA. Ny farihy dia misy ny Lake Lake, Warner Lake, Oowah Lake, Hidden Lake, Don's Lake, Blue Lake, Dark Canyon Lake ary Ken's Lake. Ny Ken's Lake dia vao notahirizina, ary nyfanjonoanatsara araka ny tatitra angler, hoy i Black.06.14.2018
Inona ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra an'i Moaba?
Ny lehibe akaiky indrindraAirportnyMOABAdia hita any Salt Lake City (236 kilaometatra avy eoMOABA- Fiara adiny 4). Walker FieldAirport, miorina ao Grand Junction Colorado (110 kilaometatra avy eoMOABA- fiara 1 ora 45 min), manome ny safidy akaiky indrindra ho an'ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina. Mianara bebe kokoa momba ny fahazoanaMOABA,Utah.
Mandra-pahoviana ny dia avy any Denver mankany Moaba?
A mivantanamitondra fiara avy any Denver mankany Moabahaharitra 5,5 ora eo ho eo vao mahavita ny 355 kilaometatra. Handany ny ankamaroan'ny fanananao ianaofiaraamin'ny i70.
Nahoana izy ireo no antsoina hoe Tendrombohitra La Sal?
Euro-amerikana voalohany indrindraAnaranaavy amin'ny Espaniola, izayniantso azyhacksaw an'nyny sira, na 'TENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAny sira. ' Frays Silvestre Velez de Escalante sy Francisco Atanasio Dominguez no nandalo nyTENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAtamin'ny 1776, nanonona tao amin'ny diariny faizanydia 'izanyantsoina hoeHO AN'NYEryny fandriana sira eo akaikin'nyizanyavy aiza. . .
Inona ny toerana avo indrindra any Utah?
nytendrombohitra avo indrindra any Utahamin'ny 13,528 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, KingstendronyMety tsy hahatratra ny tampon-tampon'ny vanin'i Denali any Alaska, ny Himalaya, na ny Andes, saingy manolotra fomba fijery miavaka ao an-tokotaninay.
Ahoana ny fomba hahatongavana any La Sal Mountain Loop?
Avy any Moaba, mianatsimo mianatsimo any US 191 sahabo ho 8 miles ary mihodina miankavia amin'ny mari'ny Ken's Lake / La Sal Mountain Loop Road. Mankanesa miankavanana eo amin'ny fihaonambe T ary manaraha ny làlana La Sal Mountain Loop miakatra mankamin'ny tendrombohitra. Ny lalana dia mamaky ny tendrombohitra ary midina amin'ny alàlan'ny switchbacks mankany Castle Valley.
Aiza no hahitana ireo Tendrombohitra La Sal any Utah?
Amin'ny làlambe Castle Valley, azonao atao ny mivily miankavanana ary manaraka ny fitsidihana loop lehibe na mitsangatsangana amin'ny lalana Utah Highway 128 mankany Fisher Towers (5,6 miles) sy ny tetezana fampiatoana Dewey (15 kilaometatra). Ny mitondra fiara hatrany amin'ny lohasaha Castle, ny Pretra sy Masera ary Castle Rock dia eo amin'ny ankavianao tokony ho 4 km miala ny Scenic Byway 128.
Mandra-pahoviana ny dia avy any Moaba ka hatrany La Sal?
La Sal Mountain Loop Road. Ny fiverenana any Moab dia manome familiana 60 kilaometatra izay mitaky adiny 3 eo ho eo vao vita. Mariho fa maro ny fihodinan'ny volo eo amin'ny sisin'ny Lohasahan'i Castle amin'ity làlana ity dia tsy mety amin'ny RV be dia be.